အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရပေမယ့် အကြော်ရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမစွန့်လွှတ်ဘဲ ချစ်ဇနီးလေးနဲ့အတူ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သားငယ် – အောငျနိုငျသူ
အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရပေမယ့် အကြော်ရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမစွန့်လွှတ်ဘဲ ချစ်ဇနီးလေးနဲ့အတူ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သားငယ်
Aung Naing Thu | November 24, 2020 | Cele News | No Comments
အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရပေမယ့် အကြော်ရောင်းတဲ့အလုပ်ကို မစွန့်လွှတ်ဘဲ ချစ်ဇနီးနဲ့အတူ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သားငယ်
အဆိုတော် သားငယ်ကတော့ Myanmar Idol Season2သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Winner ဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ပြိုင်ပွဲကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ဝန်းရံအားပေးမှုကို အများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ သားငယ်က အခုဆိုရင် အောင်မြင်တဲ့ဘဝကို ရရှိထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ သားငယ်ကတော့ အသံကောင်းသလို အရည်အချင်းလည်းရှိတာကြောင့်ဘဲ
ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။အရင်က ချစ်ဇနီးချောလေးနဲ့အတူ အကြော်ရောင်းခဲ့တဲ့ သားငယ်က အခုလိုအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်ဘဲ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးကို တန်ဖိုးထားကာ လုပ်ကိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
သားငယ်တို့ဇနီးမောင်နှံက အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းမောင်တစ်ထမ်းမောင်တစ်ရွက် ဆောင်ရွက်တတ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကပါ သဘောကျနေရတာပါ။ အခုလည်း သားငယ်က ချစ်ဇနီးနဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
သားငယ်က ပဲစိမ့်ကြော် ရောင်းမယ်ဟေ့ !Live လွှင့်ပြီးရောင်းရမလား ! Delivery နဲ့ ပို့ရမလား ဆိုပြီး အကြော်ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံလေးတွေကို တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ပကာသနတွေကင်းတဲ့ သားငယ်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဘဝလေးကတော့ အရမ်းကိုအေးချမ်းပြီး ပျော်စရာကောင်းနေတာပါနော်။credit
Unicode…အောငျမွငျတဲ့ဘဝကိုရပမေယျ့ အကွျောရောငျးတဲ့အလုပျကို မစှနျ့လှတျဘဲ ခဈြဇနီးနဲ့အတူ လုပျကိုငျနတေဲ့ သားငယျ
အဆိုတျော သားငယျကတော့ Myanmar Idol Season2သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲကွီးမှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့ပွီးတော့ Winner ဆုကွီးကို ထိုကျထိုကျတနျတနျ ဆှတျခူးရရှိခဲ့သူ ဖွဈပါတယျနျော။
ပွိုငျပှဲကာလတဈလြှောကျလုံးမှာလညျး ပရိသတျတှရေဲ့ဝနျးရံအားပေးမှုကို အမြားဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ သားငယျက အခုဆိုရငျ အောငျမွငျတဲ့ဘဝကို ရရှိထားပွီ ဖွဈပါတယျနျော။ သားငယျကတော့ အသံကောငျးသလို အရညျအခငျြးလညျးရှိတာကွောငျ့ဘဲ
ဂီတလမျးကွောငျးပျေါမှာ ဆကျလကျလြှောကျလှမျးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျနျော။အရငျက ခဈြဇနီးခြောလေးနဲ့အတူ အကွျောရောငျးခဲ့တဲ့ သားငယျက အခုလိုအောငျမွငျနတေဲ့အခြိနျမှာတောငျဘဲ သူ့ရဲ့ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလုပျငနျးလေးကို တနျဖိုးထားကာ လုပျကိုငျနဆေဲ ဖွဈပါတယျနျော။
သားငယျတို့ဇနီးမောငျနှံက အလုပျလုပျတဲ့နရောမှာလညျးမောငျတဈထမျးမောငျတဈရှကျ ဆောငျရှကျတတျတာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေပါ သဘောကနြရေတာပါ။ အခုလညျး သားငယျက ခဈြဇနီးနဲ့ပုံရိပျလေးတှကေို မြှဝထေားတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
သားငယျက ပဲစိမျ့ကွျော ရောငျးမယျဟေ့ !Live လှငျ့ပွီးရောငျးရမလား ! Delivery နဲ့ ပို့ရမလား ဆိုပွီး အကွျောရောငျးတဲ့လုပျငနျးမှာ ပြျောရှငျနတေဲ့ပုံလေးတှကေို တငျထားတာ ဖွဈပါတယျနျော။ ပကာသနတှကေငျးတဲ့ သားငယျတို့ဇနီးမောငျနှံရဲ့ဘဝလေးကတော့ အရမျးကိုအေးခမျြးပွီး ပြျောစရာကောငျးနတောပါနျော။credit
အနုပညာအလုပ်ကို ဆက်မလုပ်ဘဲ ရပ်နားခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် နဝရတ်
မိဘတွေရဲ့လောင်းရိပ်အောက်ကထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင် လက်ဝတ်ရတနာ Brand တည်ထောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ G
နာရေးကူညီမှုအသင်းကို ဆက်ခံရမယ့်သူလို့ နာမည်ထွက်နေတဲ့အပေါ်မှာ သူ့ရဲ့သဘောထားကို ပြောလာတဲ့ ထွန်းကိုကို
အင်းစိန် ထောင်ထဲကနေ ပရိတ်သတ်တွေကို အမှာစကား ပါးလာတဲ့ မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်